Mpamonjy voina: nahazo fitaovana tamin’ny Mad’Energie | NewsMada
Mpamonjy voina: nahazo fitaovana tamin’ny Mad’Energie
Par Taratra sur 21/11/2018
Nanolotra fanampiana ho an’ny mpamonjy voin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ny orinasa Mad’Energie avy any Toulouse Frantsa, tetsy amin’ny foibe toeran’ny mpamonjy voina Tsaralalàna omaly. Nahitana fanamiana natokana ho an’ny mpamonjy voina miisa 150 ao anatin’izany fanampiana izany. Nanolotra izany ny filohan’ny orinasa Mad’Energie, i Michel Lavocat, nisolo tena ny kaominina Antananarivo Renivohitra kosa, nandray izao fanomezana izao, ny lehiben’ny mpamonjy voina eto an-drRnivohitra, ny kaomandà Ramanoara Francky.
Miasa amin’ny sehatry ny angovo avy amin’ny masoandro eto Madagasikara ny Mad’Enerige avy any Toulouse. Nambaran’ny filohany fa mbola hitohy izao fiaraha-miasa amin’ny mpamonjy voin’Antananarivo izao.
« Sady haingo kosa no fiarovana ho an’ny mpamonjy voina izao fanomezana izao », hoy ny lehiben’ny mpamonjy voina, ny kaomandà Ramanoara Francky. Nisy ihany koa fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa nandritra izao lanonana tetsy Tsaralalàna izao.